Nagu saabsan - Hebei Huipin Makiinado Co., Ltd.
Waxaan nahay ganacsi ballaaran oo hadhuudh iyo saliid ku takhasusay cilmi baarista sayniska, naqshadeynta, wax soo saarka, iibka iyo rakibaadda injineernimada.
Waxyaabaha HP & Mechine
Ka dib in ka badan 40 sano oo horumar ah, shirkaddu waxay hadda leedahay saldhig wax soo saar dufan oo heer-koowaad ah, injineero farsamo dufan leh iyo khubaro, iyo sidoo kale tikniyoolajiyad wax soo saar casri ah iyo qalab sax ah Dhammaan qalabka dufanka iyo qalabyada waxaa loo soo saaraa si madax bannaan.
Shirkadeena oo dhameystiran qalabka xariijinta wax soo saarka saliida, nadiifinta alaabta ceyriinka ah, gogoldhigga, leaching, turxaan bixinta, buuxinta iyo wax soo saarka wax soo saarka (sida fosfooliid injineernimada, injineernimada borotiinka) waxaa soo saaray shirkadeena iyadoo lala kaashanayo hay'adaha cilmi baarista gudaha iyo hay'adaha. Tikniyoolajiyadda wax soo saarka saliidda ee horumarsan waxay khuseysaa dhammaan noocyada dhirta saliidda ee waaweyn, kuwa dhexe iyo kuwa yaryar. Shirkadeena sidoo kale waxay ku saleysnaan doontaa shuruudaha macaamiisha iyo horumarka mustaqbalka ee naqshadeynta macaamiisha iyo qaabeynta warshadda, isbeddelka dhirta hore, si loo xalliyo dhibaatooyinka ay la kulmaan macaamiisha wax soo saarka saliidda.
Waxaan u sameyn doonnaa qorshayaal iyo xigashooyin macaamiisha iyadoo loo eegayo baahidooda.
Injineeradeenuna waxay mas'uul ka noqon doonaan hagidda rakibidda iyo hawlgelinta qalabka, waxayna mas'uul ka noqon doonaan tababbarka hawlwadeennada aqoon isweydaarsiga illaa ay si fiican u socdaan.
Shirkadeenu waxay ku dhegan tahay fikradda ganacsi ee "sumcadda marka hore, sayniska iyo tiknoolajiyadda hoggaamineysa", waxayna si tartiib tartiib ah u samaysatay dhaqan shirkadeed oo adeegga u janjeedha. U hoggaansanaanta barta bilowga ah, heerarka sare, si aad u siiso macaamiisha adeeg tayo leh oo tayo leh.
Mabda'a "Huipin": nafteena u hurna horumarinta hadhuudhka iyo warshadaha saliidda iyada oo awooddeena ah!
Fikradda "Huipin": sumcadda marka hore, tiknoolajiyadda hoggaamineysa!
Mabda'a adeegga "Huipin": adeegga macaamiisha oo dhammaystiran oo dhammaystiran!
1. 12 bilood oo damaanad ah marka laga reebo qaybaha xiran
2. Buugga Isticmaalaha Ingiriisiga oo Faahfaahsan ayaa laga soo saari doonaa mashiinka
3. Qaybaha jabay ee dhibaatada tayada (marka laga reebo qaybaha xirashada) waxaa lagu diri doonaa bilaash
4.Timely ka jawaab dhibaatada macaamiisha ee farsamo
Cusboonaysiinta badeecadaha cusub ee loogu talagalay tixraaca macaamiisha
1. Ku ilaali 24 saacadood khadka tooska ah si aad uga jawaabto macaamiisha weyddiinta iyo farriinta khadka tooska ah
2.Sida waafaqsan shuruudaha macaamilka, hagaha macaamilku wuxuu doortaa qaabka ugu habboon ee ugu habboon
3.Iffer faahfaahinta mashiinka faahfaahsan, sawirada iyo qiimaha ugu fiican ee warshadda
Ku soo dhawow macaamiisha inay soo booqdaan oo ay kala xaajoodaan ganacsiga!
Alaabada Featured, Khariidadda bogga, Dhammaan Alaabooyinka Mashiinka Madbacada, Saliida Saliida, Saliida Olive, Mashiinka Saliida Qabow, Saliida Saliida, Mashiinka Mashiinka Mashiinka Yar,